Indlela yokunciphisa umzimba ngeFotohop kunye nezinye iziphumo zokuzonwabisa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Indlela yokunciphisa umzimba nge-Photoshop kunye nezinye iziphumo zokuzonwabisa
Njani ukunciphisa umzimba umntu onaye Photoshop nabanye iziphumo ezimnandi baya kukuvumela unomzimba wemagazini ngenxa yesinye sezixhobo ezikhulu ze Photoshop isetyenziselwa ukuchukumisa umzimba weemodeli kunye nokufezekisa iziphumo "ezigqibeleleyo". Isixhobo esithi inokusetyenziselwa ukuguqula umzimba ujonge ukufezekisa iziphumo ezifanelekileyo kumzi mveliso wefashoni okanye inokusetyenziselwa ukukhangela iziphumo eziphambeneyo kakhulu.
Funda ukusebenzisa Esinye sezixhobo ezikhulu ze Photoshop eya kukuvumela ukuba uphinde ufake iifoto kwisitayile esinyulu se ishishini lefashoni. Ukuba awuyithandi imbono yefashoni fumana bonke ubuchule bakho bokwenza zonke iintlobo zeekhathuni zokuyila ngeefoto zakho (okanye ezabahlobo bakho).
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukwenza ezi ntlobo zeziphumo zezi khangela ifoto esifuna ukusebenza ngayo. Emva koku siza kuvula ngayo Photoshop kwaye siza kuqala ukusebenza nayo.
Los amanyathelo kwesi sifundo Zizo zilandelayo:
Vula isixhobo esinamanzi kwi Photoshop
Khetha isixhobo se-warp phambili (liquefy)
Yenza imaski yokhuselo (ulwelo)
Sebenzisa ukufafaza kunye nokucacisa (liquefy) ukhetho
1 Isixhobo setywala
2 Yenza iziphumo zokuzonwabisa ngesixhobo esinamanzi
Esi sixhobo sisixhobo se ophetheyo ukwenza i-retouching kuzo zonke iifoto esizibonayo kwiimagazini kunye nentengiso. Ukusebenza kwayo kulula, kucacile ukuba iyintoni na yintsimbi umfanekiso ngendlela elawulwayo.
Into yokuqala esiyenzayo yile uthathe isigqibo sokuba zeziphi iindawo esiza kuzichukumisa yomfanekiso wethu.
Nje ukuba sithathe isigqibo sokuba yeyiphi imimandla esifuna ukuyichukumisa, into elandelayo ekufuneka siyenzile ukuvula isixhobo esine-liquefy Photoshop, Esi sixhobo sikwi Uluhlu oluphezulu lokucoca ulwelo / ulwelo.
Nje ukuba isixhobo sivule into ekufuneka siyenzile khetha i-warp phambili ukhethoe (imilo yomnwe) ngaphakathi kwe- imenyu yesixhobo esinamanzi, olu khetho lubekwe ngaphezulu ngasekhohlo.
Ngaphakathi kwesi sixhobo singatshintsha iindlela ezahlukeneyo kuxhomekeke kwiimfuno zomntu ngamnye kuthi. Olunye lolona khetho luqhelekileyo zezi:
Tamaño (isinceda ukuba sitshintshe ubungakanani bebrashi kwaye sisebenze ngokuchanekileyo)
Bonisa imaski (imaski isetyenziselwa ukukhusela iindawo ezithile emfanekisweni)
Bonisa okwangasemva (umfanekiso ongemva unceda njengesalathiso xa siphinda silungisa)
Ukuphinda ubeke umfanekiso ngokulula sikhetha ubungakanani bebrashi ezihambelana neemfuno zethu kwaye siqala ukwenza njalo lungisa ezo ndawo sizifunayo.
Yenza iziphumo zokuzonwabisa ngesixhobo esinamanzi
La isixhobo esinamanzi inokusetyenziselwa yenza iziphumo ezonwabisayo kwisitayile esicocekileyo sekhathuni. Phinda ubambe zonke iifoto zakho ezenza imifanekiso emnandi ethi wonke umntu ayithande esebenzisa isixhobo esinye esisetyenziselwa ukufumana imizimba efanelekileyo.
Ukuba uyaluthanda olu hlobo lwemifanekiso kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo ukuze ukwazi ukuzenzela ngoncedo lwe Photoshop.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile vula umfanekiso wethu kwi Photoshop kwaye ukhethe i isixhobo sokucoca ulwelo ebekwe kwimenyu ephezulu. Nje ukuba isixhobo sivuleke sinokuqala ukudala umntwana wethu omncinci UFrankenstein.
Sikhetha ifayile ye- ukhetho lokufaka ngaphakathi kwesixhobo esinamanzi ukwandisa ubungakanani bamehlo. Inkqubo ilula, kuqala sikhetha ubungakanani bebrashi efanelekileyo kwaye emva koko ubeke ibrashi embindini weliso ukuyifumba ngendlela elungeleleneyo.
Inyathelo elilandelayo kukwenza ngokuchaseneyo, deflate umfanekiso. Ukwenza oku sikhetha i deflate ukhetho ngaphakathi kwesixhobo esinamanzi. Ngale nyathelo sifumana ukhetho olunomdla kakhulu kwesi sixhobo, imaski yokukhusela. Le maski iyasivumela khusela indawo ethile ngendlela engazukuchaphazeleka kukutshintsha esikwenzayo kuyo.
Njengoko sibona esi sixhobo sisivumela ukuba senze inani elikhulu lokuchukumisa ezihamba ngaphaya kwentengiso elula zikhangela umzimba ogqibeleleyo. Ukuba ufuna ukubona ifayile ye- umzekelo wolu hlobo lwe-retouch ngokomsebenzi ungabukela le vidiyo ilandelayo.
Isixhobo siyasivumela ukukhubaza imifanekiso kwintando yethu ngokululaUsetyenziso olunokwenzeka ukuba silunika lunokuba lukhulu ukuba sidibanisa ubuninzi bokudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Indlela yokunciphisa umzimba nge-Photoshop kunye nezinye iziphumo zokuzonwabisa
Intengiso yoyilo lwasentlalweni ukusindisa iplanethi
Yintoni uyilo? Yinto enokusinceda ebomini bethu